५० वर्षसम्म रिक्सा चलाउदा पनि साहुकै रिक्सा - VOICE OF NEPAL
५० वर्षसम्म रिक्सा चलाउदा पनि साहुकै रिक्सा
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १६:४५
304 ??? ???????
रिक्सा गुडाएको आधा शताब्दीमा उनले ठूलो प्रगति गरेनन् तर मागेर खानुपरेको छैन । बीसको दशकमा एक जनाको भाडा सुका मोहर थियो । उनी हनुमानढोकाबाट असनको १० मोहर, सिंहदरबारको २० मोहर, ठमेलको १५ मोहर, लाजिम्पाटको २५ मोहर थियो । अहिले क्रमशः १२०, १५०, २०० रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
काठमाडौंको वसन्तपुर डबली अगाडि १५ वटा रिक्सा लाम लगाएर राखिएका थिए । त्यसमध्ये एउटा रिक्सामा बसेर ७१ वर्षीय मंगल तामाङ यात्रु पर्खिरहेका थिए । उनी वैशाखको गर्मीमा टहलिरहेका पर्यटकतिर आँखा डुलाइरहेका थिए। एक पर्यटकले ठमेल जान चाहेको बतायो । उनले जानीनजानी अंगे्रजीमा पर्यटकसँग बार्गेनिङ गरे । कुरा मिल्यो । पर्यटक रिक्सामा चढ्यो । उनी पर्यटकलाई बोकेर ठमेलतिर लागे ।
मंगल आधा घण्टापछि पुनःत्यहीं देखिए । रिक्सामा बसेर आरामगर्न थाले । काँधको तौलिया झिकेर निधारको पसिना पुछे । ऐतिहासिक बसन्तपुरको गद्दीतिर नियाले, जसलाई २०७२ को महाभूकम्पले जीर्ण पारेको थियो । त्यस्तै, जीर्ण बनाइदिएको छसाहुको रिक्साले उनलाई । रिक्साको पाइडल मारेर उनीठमेल, वसन्तपुर, न्युरोड, इन्द्र चोक, असनका साँघुरा गल्ली छिचोलिरहन्छन् ।
‘हामीलाई पहिला ड्राइभर भन्थे’, उनी विगत सम्झिँदै भन्छन्,‘ अहिले सहरियाले रिक्सावाला भन्छन् ।’भूकम्पका बेलादुइटा रिक्सा च्यापिए । रिक्सावालाले भागेर ज्यान जोगाए । भाग्नेमा उनी पनि पर्छन् । घाउको खत देखाउँदै उनी भन्छन्, ‘घुँडामा बढी बल प¥यो भने दुख्छ ।’
उनले रिक्सा चलाउन थालेको आधाशताब्दी भयो। उनी १५ वर्षको उमेरमा काठमाडौं छिरेका थिए । ‘मैले रिक्सा चलाउन थालेको २०१७ सालतिर हो सायद पञ्चायत शासन थियो’, उनी भन्छन्, ‘रिक्साको मोह अझै घटेको छैन । पञ्चेले देखाएको डरले कैयन् दिन रिक्साचलाइनँ। तैपनि रिक्सा चलाउन छोडिएन ।’
असन सुुन्दर युवतीझैं
उनका दाँत झरिसके । गाला चाउरिए । कपाल खुइलिए । तालु छोप्न क्याप लगाउँछन् । फ्याक्त परेको भुँडी भएपनि हलुकासँग रिक्सा हुइँकाउँछन् । रिक्साकै कमाइले जहान परिवार पाल्दै आएका छन् । ‘२०१७–१८ सालतिर रिक्साका लागि पनि पैदल यात्रुले बाटो छाड्थे’, उनी भन्छन्,‘अहिले रिक्सालाई टेर्दैनन् ।’
बसन्तपुर फेरिएको उनको अनुभव छ । तन्नेरी आँखाले देखेको राजधानीको कायादिन–प्रतिदिन बदलिइरहेको छ । रिक्साको संरचनामा फेरबदल आयो । तर, फेरिएन उनको दिनचर्या । सुरुवाती चरणमा रहरले चलाएको रिक्सा उनी करले चलाइरहेका छन् । भन्छन्, ‘पहिला रिक्सा चलाउनु नि ठूलै हुन्थ्यो अहिले हेला गर्छन् ।’
असनको बजार सिंगारिएकी युवतीझैं लाग्छ उनलाई । जहिले भीडभाडमै हराएकी देख्छन् उनी । यही भीडलाई छिचोलेर जीवनमा ५० वटा वर्ष छिचोले उनले । यो ५० वर्षमा राजनीतिमा धेरै फेरबदल भइरह्यो । तर, असनबजार र बसन्तपुरमा रिक्सा गुडाउने रिक्सावालाको जीवनमा कुनै परिवर्तन देख्न सकिन्न ।
पाकिस्तानमा जुल्फिकर अलिभुट्टोको हत्यापछि नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यही आन्दोलनका थुपै्र विद्यार्थी नेतालाई बोकेर रिक्सा कुदाउँथे उनी । देश पञ्चयातको निरंकुशताबाट गुज्रिरहेको थियो । दलका नेताकार्यकर्ता भागाभाग गर्थे । ज्यान जोगाउन भाग्नेहरूलाई बोकेर उनी स्वयंज्या नजोगाउने दौडमा रिक्सा हुइँकाउँथे । ‘खरो पञ्चायतले खरो दौडाउँथ्यो’, उनीभन्छन् ।
सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था भन्नेमा ३६ सालको जनमत संग्रहमा यही आन्दोलनको नतिजापछि खरो पञ्चायतले निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो । तर, मंगलयी कुरालाई बेवास्ता गरी रिक्सा चलाइरहे । भन्छन्, ‘त्यसबेला आन्दोलनकारीलाई रिक्साले धेरै सहयोग पु¥याएको थियो ।’
आफूले राजनीति नगरेपनि राजनीतिको प्रभाव भने उनी र उनको रिक्साले भोगेको बताउँछन् उनी । बहुदली यव्यवस्था ल्याउन आन्दोलन भयो । १० वर्ष सशस्त्रद्वन्द्व चल्यो । ०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि उनको रिक्साले धेरै ठूलो भूमिका खेल्यो । धेरै पटक बन्द, हडताल भयो ।तर, रिक्सा रोकिएन । भन्छन्, ‘नेपाल बन्द हुँदा राम्रो कमाइ हुन्थ्यो ।’
५० वर्षसम्म साहुकै रिक्सा
रिक्सा गुडाएको आधाशताब्दी माउनले ठूलो प्रगति गरेनन् तर मागेर खानुपरेको छैन । बीसको दशकमा एक जनाको भाडा सुकामोहर थियो । उनी हनुमानढोकाबाटअसनको १० मोहर, सिंहदरबारको २० मोहर, ठमेलको १५ मोहर, लाजिम्पाटको २५ मोहर थियो । अहिले क्रमशः १२०, १५०, २०० रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
त्यस बेला एउटा रिक्साको मोल ४ सय पथ्र्यो । अहिले १लाखसम्म पर्ने उनी बताउँछन् । हाल ठमेल, बसन्तपुर इन्द्र चोक वरिपरि १ सय ५२ वटासम्म रिक्सा चल्दै आइरहेका छन् । कुनै जमाना असनको आकर्षण रिक्सा थियो । अहिले इन्जिन सवारी साधनका कारण रिक्साको चार्म घटिरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘रिक्सा चलाउनेहरू पलायन हुँदै छन् ।’
उनको साहुका ५० वटा रिक्सा छन् । उनको आफ्नै रिक्सा छैन । दैनिक रिक्सा चलाउँदै आएका मंगल साहुलाई दैनिक १ सय रुपैयाँ बुझाउँछन् । भन्छन्, ‘कमाइ भएपनि नभएपनि एक सय तिर्नै पर्छ ।’
रिक्सा चलाएर नयाँ रिक्सा किन्न सक्ने बनाए नउनलाई । तर, मोह रिक्सामै छ उनको । जीवन धान्न मात्रै सघाइरहेको रिक्सातिर हेर्दै भन्छन, ‘आफ्नै रिक्सा किन्न सक्ने बनाएन साहुको रिक्साले ।’
२०१७ सालदेखि डेरा गर्दै आइरहेका छन्मंगल । पहिले मासिक भाडा ३ सय तिर्थे, अहिले ५ हजार । साहुलाई दिनेदेखि आफ्नो सबै खर्च रिक्साबाटै जुटाउनुपर्छ । ‘पपुलेसन भेइकलले रिक्सा पहिलेजस्तो खोजिन्न’, उनी भन्छन्,‘ भेइकल फ्रिजोनले रिक्सावाला मारमा परेका छन् ।’
गरिबीमा पिल्सिएका लागि रिक्सा गतिलो पहुँच हो । कम पढेलेखेकाका लागि रिक्सा सजिलो काम हो । तर, नेपालीहरू रिक्सा चढ्न लाज मान्छन् । तर, विदेशीयही रिक्सा खोज्दै हिँडेको बताउँछन् उनी । भन्छन्, ‘रिक्सा चढे खिसी गर्छन् ।’
वृद्ध भत्ताको बेवास्ता
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्यो । उनले त्यसको वास्तै गरेनन् । भन्छन्, ‘हातगोडा चलुन्जेल रिक्सा चलाएरै खान्छु ।’
सहर फेरिँदै गएको छ । सुन्दर र कलात्मक घर कंक्रिटमा रुपान्तरण हुँदै छन् । असनका गल्लीमा भएका काठका सुन्दर ढोका सटरमा फेरिए । किनमेलको कारोबार फस्टायो । तर, रिक्सावालाको जिन्दगी भने रिक्साभन्दा माथि उक्लिएन । ‘अब रिक्साको पैयाँझै खिइन्छ जिन्दगी’ उनी भन्छन् । उनले यसो भनेको सुनेर अर्को रिक्साको तन्नेरी करायो, ‘के खाथ्यौ दाइ, रिक्सा चलाएर थाक्दैनौ ?’
उनले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिए, ‘पहाडको पानी भाइ ।’
नारायणकाजीले मोदीलाई भने–‘पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथसँग आशीर्वाद लिनोस्’
नेपालमा आज मात्रै २८८ कोरोना संक्रमित थपिए , संक्रमितको संख्या २०९९ पुग्यो
वैदेशिक रोजगारीको पिडा : १० महिनामा ८०४ नेपालीको मृत्यु
भारतीयद्वारा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) मा आक्रमण
धादिङमा भुकम्प, काठमाडौंसम्म पराकम्प
नेपालमा कोरोना : ५३ जिल्लामा १४०१ संक्रमित , शनिबार मात्रै १८९ जना थपिए